Mazano Anobatsira Kubva kuSemalt On Nzira Yokugadzira A View Filter
Kuwana mushumo wakarurama, wakachena, uye unobudirira mumushandirapamwe wako wekutsvaga kutsvaga kunoratidza zvakawanda nezvebhizimisi rako mazano uye mabasa ekuita. Kwemwedzi mipfupi yapfuura, motokari dzomukati dzinokonzerwa nenhema dzekutsvaga, malware, uye vashandi vehofisi vave vachikanganisa mharidzo kuiswa uye data yeGoogle Analytics yekambani dzakawanda. Maererano ne Semalt nyanzvi, Ivan Konovalov, mukati mechipatara zvinokanganisa mawebsite uye mabhizinesi epambani pekutsvaga nekutengesa zvishoma kana zvichienzaniswa nenzvimbo huru.
Kunze kwekutengesa kwemukati kubva pawebsite yako kunokosha sekusimbisa kuti webhusaiti yako yehutano inotariswa. Kukundikana kusabvisa chitima chemukati chinokonzerwa nekushanya kwako uye kuiswa kwevashandi yako panzvimbo yako kunogona kuita kuti uende kunze kwebhizimisi. Munguva pfupi yapfuura, mishumo yakabudiswa ne SEO profession s yakaratidza kuti motokari yechipfuva inoderedza huwandu hwehuwandu hwemasayiti. Chinhu chekupedzisira chinogona kuitika kwauri paunenge uchigadzirisa mushandirapamwe wako urikuita nekuderera kwepurogiramu yehuwandu sezvavanopa shanduko yako yekushandura keyword irrelevant pane Google ranking algorithm.
Kuita zvisarudzo zvichibva pane dhemberero inotengeswa mumugwagwa wepamberi kunotungamirira kushizha rebhizimisi. Vatengi vako uye vashanyi vanobatana zviri nani newebsite yako kana vachifananidza iwe nevashandi vako..Dzimwe nzira uye zvishandiso zvakagadzirirwa kuisa mazita ekuzivikanwa kweb bots, nzvimbo dzinokudzwa, referrer spam, uye mukati mechirangaridzo kubva pakuputika neData Analytics yako. Heuno kuratidzwa kunobatsira kusika uye kuwedzera maonero ekuisa firiji kuti usabvisa chitarisiko chisingadiwi kubva kumatunhu ako.
Nzira yekugadzira maonero epi?
Tanga matanho ako nekupinda muGoogle Analytics. Dzvanya 'Add Filter' icon kuti uite imwe firiji.
Zadzai 'Bvisa Mutemo Wemukati' sezita renyu rekutsvaira uye shandisa nzvimbo yakatemerwa.
Ita yako IP kero yako uchishandisa PC yako command line uye kopi kero.
Sarudza zvakare kuGoogle Analytics uye unyore iyo yakadhindwa kero ye IP kumabhokisi anopiwa.
Kanda 'Save' icon kuti uchengetedze chikamu chako uye usabvisa mutengesi wepamberi uri kuitika kubva paIndaneti yako.
Mazano ekuti ungaedza sei mafungiro ako
Vhura Google Analytics uye chengetera 'chinyorwa chekutsvaga' pamusoro peji rako. Tarisa nechokunze kwebhandi reji rako uye chengorora zvinyorwa zvese. Vhura tab itsva, enda kune peji yepaiti yako. Siya peji rakasununguka kutarisa kuG GA tab zvakare.
Kuti uone kana iwe mafungiro ekuona ari kushanda zvakanaka, kushanya kwako kumisangano yakatarisana hakufaniri kuonekwa pane yako yekutanga kana iwe uchiita firiji.
Zvikamu zvitsva uye zvishandiso zvakashandurwa neGoogle kubatsira mabhizinesi epanzvimbo yepamusoro kugadzirisa chinangwa chavo pasina kusangana nekuderera kwehuwandu hwehutachiona uye kusvibisa malware. Isa Google Analytics uye uvandudze usati waisa mabhoti, referrer spam, malware, uye mukati mechirwere inosanganisira mabhizimisi ako emabhizimisi. Kushandura kuchinja kune sarudzo yako kwakakosha sekuita kuti browser yako ivandurwe kuti isapinda kupinda mukati mehutachiona uye zvinotyisa zvinowanikwa pawebsite yako. Kugadzira zvakakodzera hostnames zvakare kunobatsira kubvisa nzvimbo nemasayiti ne referrer spam uye ghost traffic Source .